သီတငျးကြှတျ လပွညျ့နေ့ (သို့) အဘိဓမ်မာ အခါတျောနေ့ (သို့) ပဝါရဏာနေ့ – Let Pan Daily
ဘုရားရှငျ (၇) ဝါမွောကျကာလ၊ (၇)လမွောကျ မွနျမာလ ရဟနျးသံဃာတျောမြား တဈနရောတညျး၌ ဝါကပျနထေိုငျခွငျး (သီတငျး)မှ ကြှတျခွငျး (ပွီးဆုံးခွငျး) အခါသမယဖွဈသော “သီတငျးကြှတျလပွညျ.နေ.”။ တာဝတိံသာနတျပွညျမှ အမဟေောငျး သန်တုဿီတနတျသားနှငျ.တကှ နတျဗွဟ်မာတို.အား အဘိဓမ်မာ (၇) ကမျြးဟောကွားသောကွောငျ
ရဟနျးသံဃာတျောမြားအခငျြးခငျြး အပွဈရှိကထောကျပွပွောကွားပါရနျ မာနျကငျးစှာ၊ ယဉျကြေးစှာ၊ ရိုသစှော ဖိတျမနျတိုကျတှနျးအမှုပွုကွသောကွောငျ. “ပဝါရဏာနေ.”။ အရှငျသာရိပုတ်တရာရှိရာ သင်ျကဿမွို.ကို စောငျးတနျးသုံးသှယျဖွငျ. နတျဗွဟ်မာအပေါငျးခွံရံလကျြ ဆငျးသကျတျောမူလာသော မွတျစှာဘုရားသညျ တုနှိုငျးဖှယျမရှိ၊ အလှနျတငျ.တယျ သပ်ပါယျတျောမူသောကွောငျ. နတျလူအမြား ကွညျညိုစိတျပှားကာ “ဘုရားဆုပနျကွသောနေ.”။
( အဲဒိအခြိနျမှာ အလှနျတငျ့တယျလှနျးတဲ့ မွတျစှာဘဘုရားကို အားကပြွီးတော့ သူတို့လညျး တဈခြိနျမှာ ဘုရားဖွဈခငျြတဲ့ ဆန်ဒတှေ ဖွဈပျေါလာကွတယျ ဒါကွောငျ့ ဘုရားဖွဈဖို့အတှကျ ဆုတှပေနျကွတယျ အဲဒါကိုပွောတာပါ ဒကာတျော … နာမညျကွီးတဲ့ မငျးသားတဈယောကျကို တှတေဲ့ အခါ အားကပြွီး သူ့လိုဖွဈခငျြလာတဲ့ သဘောမြိုးပေါ့ byအရှငျတဇောနန်ဒ ) ထိုသို. အဘိဓမ်မာဒသေနာဟောကွားပွီးနောကျ တာဝတိံသာနတျပွညျမှ လူ.ပွညျသို. ညခမျြးအခါ၌ ဆငျးသကျလာသော မွတျစှာဘုရားအား ဗွဟ်မာ နတျ လူ သုံးဘုံသူတို. အတူတကှ ကွညျဖွူပူဇျောသောအားဖွငျ. ဆီမီးထှနျးညှိပူဇျောကွသော “မီးထှနျးပှဲတျောနေ.”။ကြေးဇူးကွီးလှ မိဘဘိုးဘှား သကျကွီးမြား၊ ဆရာသမားမြားအား လကျဆယျဖွာမိုး၍ ရိုသစှောကနျတော.ကွသော “သကျကွီးပူဇျောပှဲနေ.” ။ ဤသို. ထူးခွားသော၊ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတို.၏ နေ.ထူးနေ.မွတျဖွဈသော သီတငျးကြှတျလပွညျ.နေ. ဥပုသျနေ.မှာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာကုသိုလျကောငျးမှုမြား အထူးပွုနိုငျကွပါစကွေောငျး ဆုမှနျကောငျးတောငျးပါသညျခငျဗြာ…။
အားလုံးကိုယျကနျြးမာ စိတျခမျြးသာ၍ ကောငျးကြိုးလိုရာဆန်ဒပွညျ.ဝကွပါစေ…..။
ဘုရားရှင် (၇) ဝါမြောက်ကာလ၊ (၇)လမြောက် မြန်မာလ ရဟန်းသံဃာတော်များ တစ်နေရာတည်း၌ ဝါကပ်နေထိုင်ခြင်း (သီတင်း)မှ ကျွတ်ခြင်း (ပြီးဆုံးခြင်း) အခါသမယဖြစ်သော “သီတင်းကျွတ်လပြည်.နေ.”။ တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ အမေဟောင်း သန္တုဿီတနတ်သားနှင်.တကွ နတ်ဗြဟ္မာတို.အား အဘိဓမ္မာ (၇) ကျမ်းဟောကြားသောကြောင်
ရဟန်းသံဃာတော်များအချင်းချင်း အပြစ်ရှိကထောက်ပြပြောကြားပါရန် မာန်ကင်းစွာ၊ ယဉ်ကျေးစွာ၊ ရိုသေစွာ ဖိတ်မန်တိုက်တွန်းအမှုပြုကြသောကြောင်. “ပဝါရဏာနေ.”။ အရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရာ သင်္ကဿမြို.ကို စောင်းတန်းသုံးသွယ်ဖြင်. နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းခြံရံလျက် ဆင်းသက်တော်မူလာသော မြတ်စွာဘုရားသည် တုနှိုင်းဖွယ်မရှိ၊ အလွန်တင်.တယ် သပ္ပါယ်တော်မူသောကြောင်. နတ်လူအများ ကြည်ညိုစိတ်ပွားကာ “ဘုရားဆုပန်ကြသောနေ.”။
( အဲဒိအချိန်မှာ အလွန်တင့်တယ်လွန်းတဲ့ မြတ်စွာဘဘုရားကို အားကျပြီးတော့ သူတို့လည်း တစ်ချိန်မှာ ဘုရားဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ် ဒါကြောင့် ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက် ဆုတွေပန်ကြတယ် အဲဒါကိုပြောတာပါ ဒကာတော် … နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ကို တွေ့တဲ့ အခါ အားကျပြီး သူ့လိုဖြစ်ချင်လာတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့ byအရှင်တေဇာနန္ဒ ) ထိုသို. အဘိဓမ္မာဒေသနာဟောကြားပြီးနောက် တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ လူ.ပြည်သို. ညချမ်းအခါ၌ ဆင်းသက်လာသော မြတ်စွာဘုရားအား ဗြဟ္မာ နတ် လူ သုံးဘုံသူတို. အတူတကွ ကြည်ဖြူပူဇော်သောအားဖြင်. ဆီမီးထွန်းညှိပူဇော်ကြသော “မီးထွန်းပွဲတော်နေ.”။ ကျေးဇူးကြီးလှ မိဘဘိုးဘွား သက်ကြီးများ၊ ဆရာသမားများအား လက်ဆယ်ဖြာမိုး၍ ရိုသေစွာကန်တော.ကြသော “သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနေ.” ။ ဤသို. ထူးခြားသော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို.၏ နေ.ထူးနေ.မြတ်ဖြစ်သော သီတင်းကျွတ်လပြည်.နေ. ဥပုသ်နေ.မှာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုများ အထူးပြုနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါသည်ခင်ဗျာ…။
အားလုံးကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ၍ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည်.ဝကြပါစေ…..။
ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောမှာ စဖွဈလာတော့မယျ့ လဖေိ အားနညျးရပျဝနျး နဲ့ သတိပွုရမယျ့ အခါလှနျမိုး (ရှယျထားပေးပါအုံး ..)
နေ့စဉ် မျက်နှာသစ်တိုင်း ရွတ်ဖတ်ပါ မမေ့ပါနဲ့